‘छुटेका अनुहार’ लाई पद्मश्री साहित्य,महेशराज पन्तलाई पद्मश्री साधना सम्मान - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । निबन्धकार रमेश सायनको संस्मरण ‘छुटेका अनुहार’ लाई वर्ष २०७५ को पद्मश्री पुरस्कार अर्पण गरिने भएको छ । खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठान, चितवनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो संस्मरणलाई पुरस्कार दिने जनाएको हो ।
वि.सं. २०६३ सालदेखि अर्पण गरिँदै आएको यो सम्मान गत वर्ष साहित्यकार नयनराज पाण्डेको संस्मरण ‘यार’ लाई प्रदान गरिएको थियो भने डा. तारानाथ शर्मालाई पद्मश्री साधना सम्मानबाट सम्मान गरेको थियो । दुवै सम्मान तथा पुरस्कार कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन अर्पण गरिने जनाइएको छ ।
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको मेरठ लिटरेचर फेस्टिवलको मुख्य […]
दूबो तिमी मलाई पुरानै मन पर्छ्यौ “कवि निरौला ।
कवि उदय निरौला “ दूबो तिमी मलाई पुरानै मन पर्छ्यौ “ हे दूवो! तिमी धेरै सफा नहुनु सानो […]